रेष्टुरेण्टमा काम गर्ने महिला कर्मचारी भन्छन्, “काम गरेर खान के को लाज” - Parichay Network
रेष्टुरेण्टमा काम गर्ने महिला कर्मचारी भन्छन्, “काम गरेर खान के को लाज”
सन्तोष बस्याल द्वारा	 ७ चैत्र २०७६, शुक्रबार १७:१३ मा प्रकाशित
भविष्य खोज्दै गाउँदेखि शहर पसेका थुप्रै महिला पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध छन् । कोही यही पेशालाई सञ्चालन गरेर बसिरहेका छन् भने कोही पर्यटन व्यवसायकै क्षेत्रमा मजदुरी गरिरहेका छन् । पोखराका रेष्टुरेण्टमा १८ वर्ष देखि ३० वर्षको उमेर समुहका महिला कामदारहरुको संख्या धेरै छ । सिकाईको अनुभुlत संगाल्न होस् या बिहान बेलुकी दुई छाक टार्न होस् होटल, रेष्टुरेण्टमै उनीहरु हात पाखुरा बजाlररहेका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरुले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा बेलाबेलामा समाचारहरु प्रकाशन प्रसारण नभएका होइनन् । यसैक्रममा पोखराको मुग्लान रेष्टुरेण्टमा वेटर र कुकमा काम गर्ने महिलाहरुको अवस्था कस्तो छ ? वास्तवमै उनीहरुको काम कस्तो छ ? उक्त कामबाट उनीहरु कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? महिला भएकै कारण लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्नुपरेको अवस्था छ कि छैन ? भन्ने विषयमा हामीले एक रिर्पोट तयार पारेका छौ :
चाउथे स्थाई घर भएकी चन्द्रकला त्रिपाठी विगत पाँच महिनादेखि मुग्लान रेष्टुरेण्ट एण्ड बार सभागृह मिडटाउनमा वेट्रेस पदमा कार्यरत छिन् । २३ वर्षकी त्रिपाठी कामबाट सन्तुष्ट छिन् । पारिवारिक वातावरणमा काम गर्ने अवसर मिलेकाले महिला भएकै कारण अफ्ठयारो नभएको उनी बताउँछिन् । तलबको विषयमा बुझ्दा उनले समयमा पाएको बताइन् । कहिलेकाहिँ ढिलोचाँडो हुनु स्वभाविक भएको उनको तर्क थियो । तलबमा सिनियर जुनियरका हिसाबले तलमाथि भएपनि भेदभाव भने नभएको उनले बताइन् ।
होटल, रेष्टुरेण्ट लाइनमा महिलाहरु काम गरेको समाजमा नराम्रो सोच्ने प्रवृति गाउँमा भएपनि पछिल्लो समय सुधार हुँदै गएको उनी पाउँछिन् । वेट्रेस गर्दा तपाईलाई लाज लाग्दैन भन्ने प्रशनमा उनी भन्छिन्,“काम गरेर खान के को लाज” । सुरक्षाका दृष्टिकोणले रेष्टुरेण्ट लाइनमा काम गर्दा आफुले कठिनाई भोग्न नपरेको त्रिपाठी बताउँछिन् ।
मुस्ताङकी तुमसान गुरुङ मुग्लानमै कुकको काम गर्छिन् । उनी आफ्नो पेशाबाट सन्तुष्ट छिन् । भन्छिन्, “अरु रेष्टुरेण्ट भन्दा मुग्लान फरक छ । समयमै तलब पाइन्छ । आफ्नै परिवार जस्तो व्यवहार गरिन्छ । काममा आनन्दको महशुस हुन्छ ।” महिला भएकै कारण भेदभाव उनले खेप्नुपरेको छैन । बरु पुरुष कर्मचारी बाटै उनले सहयोग पाएकी छिन् । २३ वर्षकी गुरुङ पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदा खुशी अनुभुती साट्छिन् । भन्छिन्, “यो पेशा राम्रो छ । काम गर्नुपर्यो त्यति हो ।”
गुल्मी स्थाई घर भई पोखरा रानीपौवा बस्दै आएकी तारा प्रसाई मुग्लानमा वेट्रेस पदमा आबद्ध छिन् । उनी पनि आफ्नो पेशाबाट सन्तुष्ट रहेको बताउँछिन् । महिला भएकै कारण आफुलाई अहिले सम्म कुनै समस्यामा नपरेको उनले बताइन् ।
तस्बिर : मुग्लान रेष्टुरेण्टको फेसबुक पेजबाट
गण्डकी प्रदेश प्रमुख शेरचनको कोरोना परीक्षण
बालबालिकालाई अनलाइन कक्षा होइन व्यवहारिक सिप (अन्तर संवाद)
वृद्धहरुलाई खाना खुवाउँदै मनकारी मनहरु
लकडाउनमा पनि विकास निर्माणका काममा व्यस्त छन् सांसद पहारी